Q. 2aad ❤❤miyanad i daremahayn❤❤ – dhugasho
haddisabdi Maarso 3, 2017 sheekooyin
Q. 2aad ❤❤miyanad i daremahayn❤❤
Inaaan hadlaan u holladey, haddana waan kari wayay. Waxaan sii hoosa u idhi anoo codkayga baddalaya; haddaa seed aniga ii dhaqeysaa adoo qalbigaaga qof kale ku jiro. Hadallo aan ka naxay buu ii sheegay, sidan buu igu idhi.
Walaal been kuu sheegi maayo, anu inaantaasaan jeclahay, waa sababta àan magaceeda kuugu yeedhay. Duruuf baase igu qasabtay, maadaama aan jeceylkaygi waayay in aan guursado bal inuu in uun aan ilaawo iyo anoo qurbe ku nool oo noloshii kalinimada ahayd wadi kari waayey. Run baan wll ku sheegaya waan qarwaa waan qayliyaa marar badana waaban xanuusadey sababo jacaylkayga la xidhiidha awgood. Ee walaal haddii aad asxaan ii sameyn karayso wll i caawi baan ku odhan lahaa boogaha intey ii bogsanayaan samir igula noolow fadlan haygu odhan naagta iga daa, waayo qalbigeygay raacday waan cadaadaystay waanan ku nafisaa hadalheynteeda. Wuu amuusay waan oyey oohin yaab leh, wuxuu ii raciyey inuu xataa damac sanyahay inuu curadiisa magaca u bixin doono. Wali maan arag qof jacayl heerkaasi gadhey waa arrin jacaylkaygii igu sii baladhisay inaan suuxaan ku dhawaadey, wuxuu yiri wll kaadh baan leeyahay labaad telphone hore baan galiyey kaadhkeygaan aan kaala hadlayo aayaan magac inaantii ku save gareyay isla aniga is garaaca waxaan mooda inay ila hadlayso kama se qabto waan dawaadaa uun heer walba waan gadhey waanse ladanahay hadda quraan badan oo laygu akhriyey darteed alxm.
Haye wll bal adna ii sheekee buu yiri; waan iska amusay, holac jacayl oo layaab leh baa igu sii furmay. Waan ka xumahay walaal buu igu yidhi malaha waad iga xanaaqdey. Haa baan ku iri si aan dareen kiisa u eego. waa qof wanaag u dhashey runtii wuu i raalli galiyey wuxuu igu yidhi;
walaal waan ka xumahay cid walba waan uga sheekeeyaa qisadeyda igamana aha inaaan ku niyad jabiyo balse afkeygaa catowga bartey waan u calaacalaa cid walba daruuf adag baan soo marey wll.
Intaa ka dib baan ku idhi; wll waan lulmooday hal saac iyo badh baanu wada hadleynee, waa qof ixtiraam badan haye buu dagdag ii yidhi salamaa walaal cafimaad ku seexo haye baan idhi. adaa sheegaya hurdo waan iska waayey cunto iska daa indhahaygii baa ilmadu ka qalali wayday walbahaar baa ii billabey.
Jacaylkayga kuma eegi karo xaaladdaas, waxaan go’aansadey inaan isu sheego meel ku haboon baan ka fikiray. Subaxii waan kallahay shaqaan lahaa galabtii baan soo raxawaxay bas aan xafadayada tagin baan soo raacay meel xaadiqad ah baan tagay waan wacay magacaygii beenta ahaa buu igu yedhay macaan codkiisu waan naxay waxaan dareemay inaan gaf ka galey jacaylkayga intasoo dhiba ayuu isoo marey. Waxaan ugu yeedhay magacisi oo saddexan waa qof aad u ixtiraam badan wuu ii mahadnaqay dabeecad wanagsanaa, wuxuu iga codsadey inuu igu soo celiyo maadaama u tukanayay. Haye baan idhi, hirar jacayl iyo walbahaar baan iska galay waan isla maqnaa runtii cirkaan daawanayey, ilmada indhahayga ka socotaa gacmahayga ayay kolba tif ku lehayd waan isla maqnaa runtii garaaca wadnahayga qof hadduu i ag fadhiyo shaki kuma jiro inuu maqli lahaa lkn cidlaan fadhiyey Ilahay baan baryay xaladdaan ku jirey yaab bay lahayd garaaca telphon kaan ku soo baraarugay waa jacaylkaygii waan ka qabtay. wuu ii salaamay, waan is hayn kari waayay kor baan u qayiley aanoo ooyaya waan ku jacalahay hebel baan ku iri! waa qof aad u naxariis badan wuu naxay wuxuu iigu jawaabay mahadsanid.
Waan sii waday hadalkaygii. Waxaan ku idhi; maalintaan ku cashaqay shaadh cad iyo surwaal jeans ah baad xidhneyd anna malxiisad baan ahaa waxaa qalbigeyga ka bixi la, sidaad habeenkaa ii soo eegaysay ma xasuustaa inaad igu tidhi; walaal qoortaada saa u quruxda badan maxaad u qaawisay, adaan kugu xasuustaa gabadh kastoo asturan si aan dardarankaaga u fuliyo maalintìi dabadeed qoortayda maan qawin. Alla wanaag ila jeclidaa ma xasuusta wuxuu ahaa arooskii hebel hebel, wuu naxay wuu qaadan wayay, aaaaaa wixii maalintaa nagu dhacay idin kama shekayn karo, wuu ii canaantay maxaad adoo ii garanaya iiga aamustey buu yidhi waan u dhaartey sidaan ku helay baan uga warramay. Waan isku dul oyney xasuus baanu galney halkaan 4 galabnimo fadhiistey 12 habeenimo baan ka kacay farxad baan la hoydey habeenkaa gaajaa ii qabatay cuntaan u baahdey. si fiican baan u casheeyay.
jacaylkaygii go’aan buu ku gaadhay inuu imaado waddankaan joogo. 19 febraury buu yimid airport kaan ka doonay, oohin buu qabsadey anna waan ku daray, saacad baanu dhaqaaqi kari weyney, waan soo kaxeeyey hotelkii aan sii kireeyay baan keenay, waanu ka soo baxney qolkii dibadaanu wada fadhisanay halkii baanu ilaa saq dhexe fadhinay
isla habeenkii xigay reerkayagu u imid. Walalkay ba loo shegay toddobaad ka dib baa lay bixiyey.
caawa waa habeen guul noo soo hoyatey, mid kaya walba hurdo aanu baryahan seexan buu seexaydey 29 february baa ley bixiyey isla habeenkii ku xigatayba waanu wareegnay maalmihii hore oo dhan inta badan waanu ooyi jirnaya wixii na soo maray. foodduu i qabtay, ducuu igu akhriyey ka dib buu laabtiisa igu qabtay, wuxuu qaadayey hees aan ila hada halkaan ku arko istaag oo ilaa ay dhamato aanan dhaqaaqin
Hamda maxaan baxnaanshey
maxaan ka ilaashay baylah
maxaan balantii adkeyay
maxay arrini igu baahdey
boholyow maxan la catabay
hadadse barbarkeyga joogto
dhibkii hore waan ka baxayo
bushariyo waa aroos
cod macaana anaa waan isla maqnaa
aaaaaaaa idinma sheegikaro wixii aanu calacal isku sheegi jirney hadda gabadh yar baan u dhalay xubi baan ula baxney. marmarka qarna waxaanu ku nidhaa kalgacal waa astaantii jacaylkayaga saygayga aad baan u jecalahay isna wuu iga daran yahay alxm nolol badhaadhe ah baa noo danbeysey waxaan sheekadan idinla wadagay maadaama ay bishani tahay febraury waa bishii jacaylkaygii aan helay waa bishii aanu is guursanay waa bishii aan xubi dhalay, waa bil aan abaal u hayo, waa bil i caawisay oo farxad igu caawisay
bilaha kale ee sanadka waan ka jeclahay waa bil ii gaara 🌷🌷🌷febraury is my month⚘⚘⚘⚘⚘⚘
fg . aniga maha qofka qisadani ku dhacaday wa gabadh hadda hargeysay inala joogaan lamanihii iyo xubbi yar ba toos baan ula kulmay markasey si wada jira iga sheekeyeen way ilmaynayeen labadooduba xubi yarna maxa idinku dhacay maamo iyo aabo bey naga hoos lahayd wlhi waan ku daray ana ismahaan ahaan
inantaasi se wey ka cudur daratey in aan magaceeda sheego
w/q Ismahan Adeeca Sawjatul Ahmednur
shekadan waad isticimaalin kartaan idinkoo
nacayb waa camal jaane ha noolaado jacaylku.
Maansadii Carraweelo – Abwaan Hadraawi
Taariikh faneedkii khadra daahir cige